Iindawo zokuhlala eziPhezulu zemithi
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguMegan
Ihonjiswe kwihombisi yeentyatyambo yanamhlanje ezisa iKhaya leLizwe lasekhaya lizive. Ibekwe ngokufanelekileyo kuzo zonke izinto eziluncedo kunye nazo zonke ezikumgama wokuhamba oko kukuthi, izikolo, iivenkile, iindawo zentselo, iindawo zokutyela, iKholeji yasePembrokeshire, uGqirha woGqirha woGqirha kunye nesibhedlele esiPhakathi saseWithybush.
2 amagumbi okulala akhoyo.
Indawo yokulala ikumgama wokuhamba ukuya kumbindi wedolophu. Nokuba ukwindawo yeshishini okanye uyibona nje ibekwe kwindawo efanelekileyo ukuze ujonge unxweme lwePembrokeshire kunye nezinye iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi.
Ndinamagumbi amabini okulala akhoyo
1 x Igumbi lamawele
1 x Igumbi lokulala elinye
Ukucacisa nje igumbi lamawele lineebhedi ezimbini ezingatshatanga kwaye akukho bantu abangaphezu kwesibini abanokwabelana ngeli gumbi.
Amagumbi am akwi-cottage style apholile kwaye amnandi.
4.66 out of 5 stars from 132 reviews
4.66 · Izimvo eziyi-132
Indawo yokuhlala enevenkile ekoneni , intlanzi kunye nevenkile yetshiphu , uthathe kude kunye neMacdonalds zonke zikumgama wokuhamba . Sinepaki ethandekayo eneNdawo yokuDlala, ibala lebhola ekhatywayo. Kwaye imizuzu emi-5 uhamba sinayo iKholeji yasePembrokeshire.
Kwakhona malunga nemizuzu eyi-10 kude ndincoma kakhulu iHotele yaseGlen ngesidlo esithandekayo endihlala ndisitya apha.
Baneemenyu ezahlukeneyo zokulungela bonke.
Ndiyafumaneka xa kufuneka